सर्वश्रेष्ठ रूले गाइड र रणनीतिहरू - Gambling Papa
1 रूलेट के हो?
2 रूलेट कसरी खेल्ने?
3 रूलेट रणनीति चार्टहरू के हुन्?
4 शुरुआतीहरूको लागि रौलेट गाइड
5 रूलेटका प्रकारहरू
6 रूले शर्त रणनीति
7 रूलेटमा कसरी जित्ने?
8 रूलेट सुझावहरू र युक्तिहरू
दिनको अन्त्यमा, क्यासिनोमा जानु धेरै जसोको लागि मनोरञ्जन भन्दा बढि हुन्छ। यो एक स्थान हुन जान्छ जहाँ उनीहरू आफ्ना साथीहरूसँग मिसाउँछन् जबकि एक स्वस्थ गतिविधि को मजा लिन्छन्।
लोकप्रिय क्यासिनो खेल जुन संसारभरि फेला पार्न सकिन्छ:
रौलेट बोर्डमा केहि दांव राख्नु भनेको अह inn्कारी कुराको रूपमा देख्न सकिन्छ। यस बाहेक, टेबलमा बलको गुच्छामा कसले काम गर्छ?
पक्का अवसरको खेल जहाँ यो बल खस्छ त्यहाँ निर्भर गर्दछ:
ठिक छ, तपाईंले अपनाउनु भएको परिप्रेक्ष्यमा निर्भर गर्दै, यो पत्ता लगाउन पर्खिरहेको एक नगदी गाई हुन सक्छ। कसरी रणनीतिक खेल्ने सिकेर, तपाईं क्यासिनोबाट टाढा जानुहुन्छ तपाईं बोक्न सक्ने भन्दा बढी क्यासिनोको साथ हुनुहुन्छ।
रूलेट के हो?
रूलेट क्यासिनोमा खेल्ने सब भन्दा पुरानो खेलहरू मध्ये एक हो। यसको वास्तविक उत्पत्ति अज्ञात छ। यद्यपि अधिकांश इतिहासकारहरू यो फ्रान्स भित्र कतै विकसित भएको विश्वास गर्छन्। हाल सम्म, अधिकांश व्यक्ति यसको उत्पत्तिसँग चिन्तित थिएनन्। यद्यपि समाजको प्रगति हुँदै जाँदा हाम्रो विरासतसँगको मोह मात्र बढ्दै गयो।
टेबलको बिचमा एउटा सानो पा wheel्ग स्पिनि::
त्यस बितेको युगमा पनि टेबलको बीचमा एउटा पा .्ग्रा राख्नु भनेको कुनै पनि उपन्यास अवधारणा थिएन। मानिसहरूले लामो समयदेखि पा whe्ग्रा प्रयोग गरिरहेका छन्। अझै, मध्य युगको दौडान कुनै समय, कसैसँग आधुनिक रूलेट तालिका सिर्जना गर्ने उज्ज्वल विचार थियो। त्यसबेलादेखि, अवधारणा विश्वको बिभिन्न किनाराहरूमा फैलिएको छ।
अपरेटरले एउटा पा onto्ग्रामा ड्रप गर्दछ:
विगतमा, मान्छेले पा turns्ग्रामा बल हाल्ने क्रममा मोड लिन्छन्। ती परम्पराको तुलनामा, हाम्रो क्यासिनो खेलहरू थोरै प्रतिबन्धात्मक छन्। जब तपाईं तिनीहरूलाई खेल्नुहुन्छ, केवल अपरेटरले बल चलाउँदछ जब खेल खेलमा हुन्छ। मलाई लाग्छ कि यसले तपाईंलाई स्थापनाबाट प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ।
बल यसको गति गुमाएसम्म वरिपरि रोल हुन्छ:
अपरेटरले बललाई जान दिए पछि, यो कताईमा छोडिन्छ। त्यस बिन्दुमा, बलको गतिले यसलाई अगाडि बढ्दछ जब सम्म यो धीमा हुँदैन। कहिलेकाँही, यस्तो देखिन्छ कि बल निरन्तर चक्रको वरिपरि घुम्नेछ। जे होस्, एक पटक पर्याप्त समय बित्यो, यो सँधै बसोबास गर्न को लागी एक विचित्र ठाउँ भेट्टाउछ।
त्यस समयमा, यो पा wheel्ग्रामा सानो विचलनमा पर्दछ:
एकचोटि यो एक विश्राम बिंदु मा पुगेपछि, दांव अब राख्न अनुमति छैन। त्यस बिन्दु सम्म माथि, खेलाडीहरूले शट लगाउन सक्दछन् बल बज्दा पनि। वास्तवमा, केहि अवसरहरूमा, यस समयमा खेलको उत्कृष्ट बेटहरू हुन्छन्। यद्यपि अब यो बसिएको छ, अपरेटरले एउटा निर्णय प्रस्तुत गर्दछ। सबैलाई सम्मिलित को लागी, अपरेटर को शब्द अन्तिम छ।
विचलन कहाँ अवस्थित छ भन्ने आधारमा, एक विजेता घोषणा गरिनेछ:
मानौं तपाईंले एउटा भित्रको शर्त राख्नु भएको छ। तसर्थ, तपाईंले बल १aमा उत्र्न आशा गर्नुभएको थियो। जे होस्, एक पटक अपरेटरले अन्तिम परिणाम घोषणा गरे पछि, यो तपाईंलाई लाग्यो कि उनीहरूले १० नम्बरलाई चिच्याए जस्तो गरी १० यति नजिक छ, यो रायोको पार गर्न पर्याप्त छैन। यसको सट्टामा, तपाइँ शर्तमा हराउनुभयो। यदि तपाईंले बाहिरी शर्त लगाउनु भएको भए, कथा एकदम फरक हुन्छ। ती मध्ये एकको साथ, तपाईं जित्न सक्नुहुनेछ जबसम्म बल तपाईं परिभाषित साँघुरो दायरा बाहिर भूमिमा जान सक्नुहुन्छ।
रूलेट कसरी खेल्ने?
जहाँसम्म खेल खेल्न जान्छ, यो सबै त्यत्ति गाह्रो छैन। एकचोटि तपाईंले आधारभूत कुरा अध्ययन गर्न केहि समय खर्च गर्नुभयो भने, तपाईं सहवासको मौसममा मोरको विश्वासको साथ टेबलमा सिधा तयार हुनुहुनेछ। अवश्य, त्यो हल्का हाइपरबोलिक हुन सक्छ। जे होस्, टेबलमा सबैको लागि, ती सबै देख्नेछन् उज्ज्वल विश्वासको आभा हो। त्यो हो, मौकाको खेलको साथ, आत्मविश्वास जहिले पनि विजेताको रूपमा टाढा हिँड्न पर्याप्त हुँदैन।
खेलको क्यासिनो नियमहरू
शर्त भित्र राख्न:
भित्र रट लगाउने सम्भावना प्राय: सामान्य हुन्छ जब यो रूलेटमा आउँदछ। मानौं तपाईं केही पैसा जित्ने चाहानुहुन्छ, बल १ lands मा ठीक मानेर। त्यसो भए, तपाईले आफ्नो चिपहरू उपयुक्त स्थानको टेबुल भित्र राख्नुहुन्छ। जबसम्म बलले तपाईंको अनुमान गरेको ठाउँमा लैजान्छ, तपाईं सुरुवाती शर्तको अड्तालसँग मिल्दो रकम जित्नुहुनेछ।
बेट्स बाहिर राख्न:
सामान्यतया बोल्दै, यदि तपाईं यी मध्ये कुनै एक राख्नुभयो भने, तपाईंको जितको अनर्थहरू बढी हुनेछ। जहाँसम्म, परिणामको रूपमा, तपाईं पनि कम प्राप्त गर्नुभयो यदि तपाईं जीत। यसैले, बाह्य दांव बीमा को एक रूप को रूपमा सोच्न को लागी गर्छ। यदि तपाईंसँग केही नराम्रो हातहरू छन् भने, तपाईं राम्रो घाँसे बाहिरी शर्तमा आफ्नो घाटा प्राय: प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईंको भुक्तानी तपाईंको शर्तको नहुनुमा निर्भर गर्दछ:
प्रत्येक शर्तको लागि, बॉन्डहरू अपरेटर द्वारा गणना गरिन्छ कसरी उनीहरूको जित्न सकिन्छ भन्ने ’bout। जसरी असमानता बढ्दछ, त्यस अनुसार तपाईको जित कम हुनेछ। यसैले, खेल जति बढी सम्भावना हुन्छ, कम यसको भुक्तानी हुनेछ।
सामान्यतया, त्यहाँ न्यूनतम र अधिकतम हुन्छन्:
धेरै जसो क्यासिनो भित्र, तपाईं एक निश्चित दायरा भित्र आफ्नो शर्त राख्न बाध्य हुनेछ। सामान्यतया, तपाईंले तिनीहरूलाई न्यूनतम शर्तमा राख्नुपर्नेछ, जबकि तिनीहरूलाई अधिकतम भन्दा तल राख्नुहोस्। अन्यथा, त्यो तालिकाबाट अस्वीकृत हुनेछ। यदि यो एक विजेता भएको भए पनि, तपाइँले तपाइँका कुनै पनि रकम प्राप्त गर्नुहुने छैन। यसैले तपाईलाई यो जान्नको लागि आवाश्यक हुन्छ कि कार्यमा भाग लिनु अघि यी सीमाहरू के हुन्।
ब्याटर्स राख्न सकिन्छ जबसम्म डिलरले यसो भन्दैन:
अन्य खेलहरू जस्तो नभई, बल गतिमा भए पनि बेट्स राख्न जारी राख्न सकिन्छ। अवश्य पनि, एक निश्चित बिन्दुमा, डिलरले व्यक्तिलाई थप बेट लगाउन रोक्दछ। त्यस बिन्दु पछि राखिएको शर्तहरू संक्षिप्त रूपमा अस्वीकृत हुनेछन्।
डली टेबलमा राखिसकेपछि सबैले आफ्नो हात आफैंमा राख्नु पर्छ:
दांव बन्द हुँदा समय दर्साउन, डिलरले टेबलमा डली राख्नेछ। धेरै जसो समय, यो एक सानो रातो पक जस्तो देखिन्छ, हकी खेलमा प्रयोग गरिएको जस्तै। तपाईंले डिलरलाई टेबलमा देख्नुभएपछि, सबैले एक कदम पछि पछाडि जानुपर्दछ र परिणामहरूको लागि पर्खनु पर्छ।
हराएको दांव एकपटक बित्दछ:
डलीको प्लेसमेन्ट पछि, डिलरले टेबलमा राखिएको स्थानको मूल्या .्कन गर्दछ। हराउने सबैका लागि, चिपहरू घरहरूमा अलग सारियो। क्यासिनोमा हराईयो, ती चिप्सहरू गइसकेकासँगै राम्रा छन्। जे होस्, डिलरले यो काम गरे पछि पनि केहि चिप्स अझै टेबलमा रहनेछ। ती मानिसहरुका चिप्स हुन् जसले जीते।
अन्तमा, डिलरले विजेतालाई भुक्तानी गर्छ:
प्रत्येक विजेताको लागि, उनीहरूको कमाईहरू उनीहरूले गरेको कलको नक्कल अनुसार गणना गरिनेछ। जतिसुकै विषम परिस्थितिहरू बढ्दै जाने सम्भावना बढ्दै जान्छ, तपाईंको आय पत्राचारमा तीव्र गतिमा उफ्रिन्छ। एकचोटि सबै कुराको हिसाब गरेपछि, डिलरले टेबल हटाउने छ सबैलाई उनीहरूको जित जितेर। त्यसो भए, सम्पूर्ण मेसिन फेरि एक वर्गमा पुन: सुरू हुन्छ।
रूलेट रणनीति चार्टहरू के हुन्?
एक तर्फ, यस्तो खेल खेल्नु एक अपेक्षाकृत सरल गतिविधि हुन सक्छ। अर्कोतर्फ, फरक मानसिकताका साथ तपाई यसलाई पैसाको रूपमा हेर्न सक्ने स्थानको रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं आफैंलाई उत्तरार्द्धको लाइनमा अझ बढी विचार गर्न चाहनुहुन्छ भने, निम्न रणनीतिहरू पर्याप्त हुनुपर्दछ।
हुनसक्छ, यो रणनीति सबै भन्दा प्रसिद्ध हो। यद्यपि, सावधानीको रूपमा हामी भन्नेछौं कि तपाईंले काम गर्नु अघि रातोमा गहिरो अन्त राख्न सक्नुहुन्छ। यस रणनीतिमा, तपाईं निरन्तर उही शर्त राख्नुहुन्छ। यदि यो हरायो भने, तपाइँ उही शर्त राख्नुहुनेछ। यद्यपि, प्रत्येक घाटाको लागि, शर्तको आकार मानमा डबल गर्नुपर्छ। अन्ततः, तपाईं पनि भंग हुनेछ। जित्न सक्दो चाँडो नै तपाईले त्यस बिन्दुमा हराउनु भएको सबै चीजलाई फिर्ता लिनुहुनेछ।
बाहिरको बेट बढी रूढीवादी हुन्छन्। किनकी ती परिणाम प्राय जसो विजयी हुन्छन्, हामी उनीहरुलाई हेजको रूपमा प्रयोग गर्न रुचाउँछौं। जब तपाइँको जेब पातलो महसुस गर्दै छ, बाहिर बेट राख्नु राम्रो परिणाम दिन सक्छ। एकचोटि तपाईंले आफ्नो भण्डार भर्नुभयो, तपाईं जोखिमपूर्ण दृष्टिकोणमा शाखा सुरु गर्न सक्नुहुनेछ।
रणनीतिक भित्रको रणनीति प्रयोग गर्दै:
सबै भित्री बेट्समा एकै भुक्तान मान हुँदैन। यसैले, यदि तपाई अत्यधिक भुक्तानीको साथ फेला पार्नुभयो भने, तपाईले सानो बेट्स राख्नको लागि अधिक कमाउन सक्नुहुन्छ। यिनीहरूले कम हिट गरे पनि, एकल जीतले पनि तपाईंलाई अचम्मको फिर्ती दिन सक्छ।
नहुनु के हो?:
प्रत्येक खेलको लागि, समस्याहरू यो बनाउनु अघि बुझिएको बुझ्नुहोस्। अन्यथा, तपाईं माइलस्ट्रममा अन्धा उडान गर्दै हुनुहुन्छ जुन तपाईंलाई अलमल्याउन सक्छ। वास्तवमा, ज्ञानको साथ सशस्त्र गरेर, तपाईं नेभिगेट गर्दै गर्दा तपाईं कहिल्यै तपाईंको मार्ग ट्र्याक गुमाउनु हुने छैन।
शुरुआतीहरूको लागि रौलेट गाइड
भाग्यवस, शुरुआतीहरूको लागि, रूलेट क्यासिनो वा अनलाइन क्यासिनो मा खेल्नको लागि सबैभन्दा पहुँचयोग्य खेलहरू मध्ये एक हो। उनीहरूले पनि खेलको ’boutमा सुनेननन् जुन यो तुलनात्मक रूपमा सीधा पाउनेछन्।
भाग बिना केही राउन्ड अवलोकन गरेर सुरू गर्नुहोस्:
यदि तपाईं पूर्ण नयाँ आगमनकर्ता हुनुहुन्छ भने, तब हामी तपाईंलाई लाइनमा पैसा राख्नु अघि गेम नदेखेसम्म कुर्दै सिफारिस गर्दछौं। अन्यथा, अवसरहरू कत्ति राम्रो छन् कि तपाईंलाई थाहा हुनु अघि त्यो पैसा जान्छ। केहि राउन्डहरू हेरेर तपाईसँग कम्तिमा राम्रो विचार हुन्छ तपाई आफैंमा के पाउनुहुन्छ।
त्यो पछ्याई, केहि सानो दांव राख्नुहोस् तथापि तपाई चीजहरूका लागि भावना प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ:
तपाईंले आधारभूतहरूको ह्या hang पाइसक्नु भएपछि, तपाईंको पहिलो बाजीहरू राख्नको लागि यो समय हो। अझै, यो हाम्रो लागि महत्वपूर्ण छ हाम्रो अघि बढ्नु हुँदैन। अन्तमा, ठूलो नाफा को सपना अक्सर आर्थिक आपततित गर्न को लागी। सुरुमा साना बेट्स राखेर, तपाईले आफ्नो सम्भावित घाटा सीमित गर्नुहुनेछ सबैभन्दा धेरै हदसम्म। यस तरिकाले तपाईले गुमाउनु भयो भने पनि तपाईले यस्तो महसुस गर्नुहुने छैन कि विश्व भत्किरहेछ।
तब, रणनीतिक जुवा सुरु गर्न माथिबाट हाम्रा रणनीतिहरू मध्ये एक प्रयोग गर्नुहोस्:
एकचोटि तपाईंले आफ्नो पहिलो केही बेट्स राख्नु भयो भने, यो रणनीतिको ’boutमा सोच्न चोट पुर्‍याउँदैन। अवश्य पनि, पहिलो केहि राउन्डहरूको लागि, चीजहरूको रमाईलोमा ध्यान दिनुहोस्। जे होस्, तपाईंको फूटि developing विकसित गरेपछि, यो चीजहरू अर्को गेयरमा लात हाल्ने समय हो। त्यसो गरेर, तपाईं रात लाभदायक रूपमा अन्त्य हुने निश्चित गर्नुहुन्छ।
अवश्य पनि, इन्टरनेट टेक्नोलोजीलाई धन्यवाद, इतिहासमा पहिले भन्दा यस गेमका धेरै संस्करणहरू छन्। आजकल, तपाइँले खेल्ने तरिका पूर्ण रूपमा व्यक्तिगत छनोट हो। तसर्थ, यो आफुलाई आफैलाई परिचित गर्नु भन्दा केहि राम्रोसँग पहिचान गर्न सकिन्छ जुन खेलले लिन्छ। तल, हामी हाम्रो मनपर्ने केहि संक्षिप्त छ।
सबै भन्दा माथि, हामी प्रेम गर्दछौं जब हामी घरमै बस्दा अन्य व्यक्तिहरूसँग खेल्न सक्छौं। यो मात्र अधिक सुविधाजनक हो, तर हामी अझै पनि सामाजिक कुराकानी को लाभ प्राप्त। यस प्रकार, खेलको नयाँ इमर्सिभ संस्करण कम्तीमा हाम्रो मापदण्डमा, एउटा प्रस्फुटित हिट भएको छ। यस संस्करणमा, तपाइँ विश्वभरका अन्य व्यक्तिहरूसँग खेल्नुहुनेछ। सबैजना भर्चुअल वातावरणमा भेला हुन्छन्। वातावरण वास्तविक क्यासिनो जस्तै छ, केवल धेरै शोर बिना।
अर्को, बिजुली रूले युवा भीडको बीचमा लोकप्रिय छ। यसको चाँडो कार्यको लागि धन्यवाद, यसले छोटो ध्यान दिने मानिसहरूलाई बढी व्यस्त राख्छ। यसका साथै तपाईको घरको आरामबाट तपाईलाई खेल्नको लागि यो अर्को विकल्प पनि हो। तिनीहरूको सर्वरहरू अनलाइन जडान गरेर, तपाईंसँग सम्पूर्ण अनुभवमा पहुँच हुनेछ।
यी पा On्ग्राहरूमा, त्यहाँ बोर्डमा थप शून्य राखिन्छ। अन्तमा, यसले घरलाई यसको पक्षमा सानो बढावा दिन्छ। अन्य संस्करणहरूबाट अर्को भिन्नता यो हुनेछ कि व्यक्तिहरू उनीहरूको चिप्स कसरी चलाउँदछन्। अमेरिकी संस्करणमा, सबैजनासँग आफ्नो रंग हुन्छ जब तिनीहरू टेबलमा राख्छन्।
यस भिन्नताका साथ तपाई १ र between 36 बीचको कुनै पनि नम्बरमा बेट्स राख्न सक्नुहुनेछ। बोर्डको संस्करणमा तपाईले एक मात्र शून्य पाउनुहुनेछ। धेरै जसो समयको मतलब तपाईसँग घरको बिरूद्धमा अलि बढी राम्रो समस्याहरू हुन्छन् जुन तपाईं खेलका अन्य संस्करणहरूसँग गर्नुहुनेछ।
सायद, खेल को फ्रान्सेली व्युत्पन्न सबै को सबै भन्दा पुरानो हुनेछ। वास्तवमा क्यासिनो इतिहासकारहरू यस संस्करणलाई मूल मान्दछन्। अन्य संस्करणको तुलनामा, खेलाडीहरूसँग कम विकल्प हुन्छन् जब उनीहरूले आफ्नो बाजी राख्छन्।
रूले शर्त रणनीति
रूलेट टेबलको अगाडि उभिएर तपाईं कस्तो रणनीति प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ? किनकि रूलेट प्रायः मौकाको खेल हो, यस्तो देखिन्छ कि त्यहाँ खेलाडीहरूको समस्याहरू सुधार गर्न केहि विकल्पहरू छन्। यद्यपि विकल्पहरू अधिक सीमित छन्, तिनीहरू प्रभावहीन देखि टाढा छन्। रणनीतिक रूपमा तिनीहरूलाई कार्यान्वयन गरेर, तपाईं लामो दौडमा धेरै राम्रो हुनुहुनेछ।
मार्टिale्गेल बनाम उल्टो मार्टिaleिंग रणनीतिहरू:
यस अघि लेखमा मार्टिale्गेल दृष्टिकोणलाई गहन रूपमा वर्णन गरिएको थियो। यद्यपि हामीले यसका करीबी समकक्ष, रिभर्स मार्टिale्गेललाई कहिले पनि उल्लेख गरेका छैनौं। यस रणनीतिको साथ, तपाईं रातमा सानो बाजी लगाएर सुरू गर्नुहुन्छ। प्रत्येक घाटा पछि, तपाईले साइजमा शर्त बढाउनुहुनेछ जबकि अर्को विकल्पमा शर्त पनि राख्नुहुनेछ। यस्तो देखिन्छ कि यो एक सानो भिन्नता हो। अझै, धेरैका लागि, यसले रात विनाशकारीबाट विस्मयकारीलाई परिणत गर्दछ।
स्थिर निरन्तर दृष्टिकोण:
आधुनिक विश्वमा स्थिरता प्राय: एक मूल्या .्कनको विशेषता हो। हाम्रो वरिपरिको सबै चीजहरू सँधै परिवर्तन हुँदै जाँदा, यो विश्वास गर्न सजिलो हुन्छ कि केहि पनि स्थिर छैन। बाह्य वस्तुहरूको बावजुद, जब तपाईं रूलेट टेबुलमा हुनुहुन्छ, तपाईंको निर्णयहरू जुन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आगमन भन्दा पहिले तपाईंको योजना बनाएर, त्यहाँ केही आश्चर्यहरू छन् जुन तपाईंको यात्रालाई ट्र्याल गर्न सक्दछन्। प्लस, यस विधिको साथ, तपाईले निश्चित रूपमा थाहा पाउनुहुनेछ कुन शर्त प्रयोग गर्ने यो एक पटक तपाईंको प्लेटमा आयो।
रूलेटमा कसरी जित्ने?
अन्य खेलहरूको तुलनामा, रूलेटमा जित्नु समूह गतिविधिको रूपमा देख्न सकिन्छ। सबै खेलाडीहरू एकै पक्षमा रहेकोमा धन्यवाद, सबै क्यासिनोलाई बैrupt्कित गर्ने प्रयासमा घर बिरूद्ध एकताबद्ध हुन्छन्। निश्चित, अघिल्लो कथन थोरै हाइपरबोलिक थियो। अझै, हामी तपाईंलाई रूलेट तालिकाको लागि राम्रो समानता वर्णन गर्न हिम्मत गर्छौं।
बल खसेपछि बाजी राख्ने:
ठीक छ, धेरै गम्भीर दृष्टिकोणको साथ, हामी विश्वास गर्छौं यो नयाँ आगमनलाई महसुस गर्नको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चीजहरू मध्ये एक हो। तपाइँले खेलको सुरूमा तपाइँको बेट्स राख्न जरूरी छैन। वास्तवमा, अन्तिम क्षण सम्म प्रतिक्षा गरेर, तपाईं बल कहाँ अन्त मा अवतरण गर्न को लागी एक राम्रो विचार हुनेछ।
विषयको कोणीय गति विश्लेषण गर्दै:
जति लामो तपाईं कुर्नुहुन्छ, बल अधिक हराउनेछ। हाम्रो कल्पना गर्न यो सजिलो छ किनकि यो कहाँ सुस्त हुन्छ यदि अन्त हुन्छ भने, थोरै कुर्नु उत्तम विचार हुन सक्छ। यस तरिकामा, जब तपाईं शर्त राख्नुहुन्छ, तपाईं भविष्यमा बल अझ थोरै प्रक्षेपण गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईले कसरी जोखिम प्रबन्ध गर्ने तरीका सिक्नु भयो:
उल्लेख गर्न आवश्यक छैन, थप सही शर्त प्लेसमेन्टको साथ, तपाईं बाहिरका खेलहरू प्रयोग गरेर प्रणाली पनि खेल्न सक्नुहुन्छ। किनकी ती पहिले नै राम्रो नराम्रा चीजहरू छन्, तपाईं यस विधि प्रयोग गरेर आफ्नो अवसर अधिकतम पार्नुहुनेछ। तसर्थ, लगनशीलताका साथ यी चरणहरूको अनुसरण गरेर, तपाईं केवल केही क्षणमा रूलेटको कला मास्टर गर्नुहुनेछ।
तलबिना जेब बराबर अन्तहीन लाभ:
निस्सन्देह, तपाइँको मुनाफा सुनिश्चित गर्न सबैभन्दा प्रभावकारी विधि मार्टिale्गेल रणनीति हुनेछ। जे होस्, सबैजना त्यो धेरै राउन्डहरूको लागि पार्ले गर्न सक्दैनन्। साथै, अधिकतम शर्त सीमाका लागि धन्यवाद, केही क्यासिनोले प्रभावी ढ effectively्गले प्रक्रिया शुरूबाट घुँडा टेका।
जब टेबुलमा राखिएको अधिकतम शर्त सीमा हुन्छ भने आफैलाई विस्तारित मार्टिaleिंगलमा चुस्न नदिनुहोस्। अन्यथा, तपाइँ एक पटक तपाइँको शर्त को आकार अधिकतम भन्दा बढी घाटा स्वीकार गर्न बाध्य हुनेछ।
त्यस बिन्दुमा, तपाईले मार्टिale्गेल प्रणाली प्रयोग जारी राख्न यो सम्भव छैन। यसको सट्टामा तपाईले एक टन पैसा गुमाउनु भयो जुन अन्तिम फलहीन लक्ष्यको पछि लागिरहेको छ।
रूलेट सुझावहरू र युक्तिहरू
सुझाव र युक्तिहरू तपाइँको फाईदा बढाउन मद्दतको लागि उत्तम हो जब यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अन्यथा, तिनीहरू कस्तो राम्रो हुन्छन्? त्यस कारणका लागि, हामीले हाम्रो कानहरूले सुनेका सल्लाहहरूका केही धेरै प्रभावशाली गाँठहरू संकलन गरेका छौं। एकचोटि तपाईंले तिनीहरूलाई हेराई गर्नुभयो, तपाईं अर्को क्यासिनो भ्रमण मा कौशल का एक अभिनव सेट प्रदर्शन गर्न तयार हुनेछ।
तपाइँको लागि कार्य गर्ने रणनीति खोज्नुहोस्:
सबै भन्दा माथि, तपाइँ प्रयोग रणनीति संग सहज महसुस सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण छ। जबसम्म तपाईं यसमा पूरै रात चिपचिलो रहनुहुन्न, यसले तपाईंको सफलतालाई बढाउने क्षमतालाई भन्दा तपाईंलाई हानि पु .्याउन सक्दछ। जबसम्म तपाईले केहि भेटाउनुहुन्न, फरक दृष्टिकोण संग प्रयोग गर्न जारी राख्नुहोस्। सबैलाई समान तरिकाले खेल खेल्न रमाईलो हुँदैन। यद्यपि ती समान प along्क्तिहरूका साथ, यो त्यस्तो होइन जस्तो केवल एक रणनीति पनि प्रभावकारी छ। वास्तवमा तपाईले पूर्ण रूपमा उपन्यास रणनीति पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ जुन हाम्रो कुनै पनि रणनीति भन्दा बढि ठूलो प्रभाव पनी छ।
तपाईंको प्रतिबद्धताहरूको माध्यमबाट पालना गर्नुहोस्:
तपाईं के भन्नु हुन्छ कि मानिसहरुको सफलता भन्दा केहि भन्दा बढि निर्धारण गर्दछ? हाम्रो दृष्टिकोणबाट, कुनै पनि व्यक्तिको उद्देश्यको लागि प्रतिबद्धता बाहेक बढी प्रभावशाली रूपमा वर्णन गर्न सकिँदैन। जब तपाइँले केहि काम पूरा गर्न लाग्नु भएको छ भनेर भन्नु हुन्छ, यसको मतलब यो हुनुपर्दछ कि तपाईं त्यो लक्ष्यमा पुग्नको लागि जे पनि गर्नुहुन्छ। सामान्यतया भन्ने हो भने, मान्छेको मतलब यो होइन कि जब उनीहरू यस्ता कुरा भन्छन्। यसको सट्टामा, सानो बाधा उनीहरूको मार्गमा बाधा पुर्‍याउने बित्तिकै जहाज जमानतमा तिनीहरू पहिलो हुन्। त्यस बिन्दुमा, के उनीहरू आश्चर्य छ कि तिनीहरू जीवन भर धेरै चीजहरू संग संघर्ष? यदि तिनीहरू सही मार्गमा थिए भने पनि उनीहरूले आफ्ना सिद्धान्तहरू त्याग्नु अघि यसलाई शायद थाँहा नै पाएका थिए।